स्वास्थ्य /जिबनशैली – Sudur Sanchar
जनकपुरधाम । पछिल्लो चार दिनदेखि मधेश प्रदेशमा चिसो अ’त्यधिक बढेको छ । दिउँसो बिहान चल्ने चिसो हावाले शीतलहर र बिहान र राति लाग्ने हुस्सुले जनजीवनलाई थप प्र’भावित बनाएको छ । हुस्सु र शीतलहरले जनकपुरधामसहित मधेश प्रदेशबाट हुने हवाइ सेवासमेत प्र’भावित भइरहेको छ । चिसोको कारण तीन जनाको मृ’त्यु भएको छ । चिसोको कारण बिरामी हुनेको संख्या उच्च रहेको छ । प्रदेशिक अस्पताल जनकपुर र यहाँका निजी हस्पिटल तथा निजी क्लिनिकहरूमा बिरामी भएर आउनेको संख्या बढी देखिएको प्रदेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत चिकित्सक केडी दासले बताए ।उपचारका लागि चिसो कारण स्वास प्रस्वासमा समस्या भएजनकपुरधाम । पछिल्लो चार दिनदेखि मधेश प्रदेशमा चिसो अ’त्यधिक बढेको छ । दिउँसो बिहान चल्ने चिसो हावाले शीतलहर र बिहान र राति लाग्ने हुस्सुले जनजीवनलाई थप प्र’भावित बनाएको छ । हुस्सु र शीतलहरले जनकपुरधामसहित मधेश प्र
काठमाडौ । नेपालमा फेरी कोभिड संक्रमितको संख्या उकालो लागेको छ । केही समय शान्त रहेको नेपालमा फेरी महामारीको संकेत देखिएको छ । सोमवार सम्म एक हजार माथि संक्रमित थपिएकामा मंगलवारको तथ्याकंमा दुई हजार माथि देखिएको छ । केही दिनयता देशभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ। पछिल्लो लहरमा बढेको कोभिडको संक्रमितको संख्यामा मंगलवार रेकर्ड बनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै थप २ हजार ४ सय ४४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत २४ घण्टामा थप १ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोभिडबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ६०७ पुगेको छ। यस्तै मंगलबार ३१३ जना संक्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर ९ हजार ५२२ सक्रिय संक्रमित छन्। गत २४ घण्टामा १० हजार ६४८ पीसीआर तथा ४ हजार ३८५ एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। काठमाडौ उपत्यकामा
कोरोना सङ्क्रमित अत्यधिक बढ्दै , २ जनाको मृ,त्यु
२६ पुस, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप 1४४६ जनामा को’रो’ना भा’इ’र’स सं’क्र’मण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ८ हजार ९६५ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा १३५७ जना र २ हजार ४६४ एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ८९ जना गरी १४४६ जनामा सं’क्र’म’ण पुष्टि भएको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा २ जनाको मृ’त्‍यु भएको छ भने २५५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । थप समाचार ~ ६० वर्षमा नेपालमा हुन नसकेको विकास एमाले तीन वर्षमा गर्योः रघुवीर महासेठ सप्तरी । नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले सरकार स्थिर भएर सही नेतृत्व नभएसम्म देश विकाश सम्भव नरहेको बताएका छन् । नेकपा एमाले सप्तरी ९औं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासेठले ६० वर्षमा नेपालमा हुन नसकेको विकास एमालेले साढे तीन वर्षमा गरेको बताए । उनले भने, ‘सबै पार्टी चाहन्छ नेकपा एमालेले नेतृत्व नगरोस् । तर, अबको सरकार एम
अब संसारका कुनै अस्पतालमा लगेपनि कहिल्यै निको नहुने , वर्षमानलाई लागेको दुर्ल’भ रो’ग के हो ?
काठमाडौंः नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन चीन र थाइल्याण्डमा उपचार गराएर तीन महिनापछि नेपाल फर्किँदैछन्। स्वास्थ्यमा सम'स्या आएपछि नेता पुनले पछिल्लो समय चीनको थर्ड पीपुल्स हस्पिटल अफ सेनजेनमा उपचार गराएका थिए। उपचारका लागि उनी गत असोज १३ मा थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेका थिए। लगत्तै त्यहाँबाट उनी चीन पुगेका थिए। चिकित्सकका अनुसार उनी ‘क्रिग्लर-नजर-टाइप टु सिन्ड्रोम’ नामक दुर्ल'भ सम'स्याबाट पीडि'त छन्। यो वं'शाणुगत रो'ग भएको बताइएको छ।पुनको शरीरमा देखिएको जण्डि'सको मात्रा अस्व'भाविकरूपमा बढेको चिकित्सकहरूले बताएका थिए। यसै सन्दर्भमा पुनमा देखिएको ‘क्रिग्लर-नजर-टाइप टु सिन्ड्रोम’ के हो भनेर जनरल फिजिसियन डा. अमित गौलीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। ‘क्रिग्लर नजर सिम्टम’ भनेको सानो उमेरदेखि वा जन्मजात नै हुने जण्डिस टाइपको एक प्रकारको रो'ग हो। जण्डि'स भएपछि मानिसमा पहेँलो
छिमेकी देशमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण बढ्न थालेको भन्दै नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। नआइतबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले छिमेकी देश भारतमा देखिएको संक्रमणको त्रा’स नेपालमा पनि भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेका हुन्। उनले सभा, जुलुस, र्‍याली, भेला, जमघट, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक र भीडभाड नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । नेपालमा समेत संक्रमण बढ्‍न सक्‍ने भएकाले सभा, गोष्ठी, जुलुस, र्‍याली, भेला, जमघट, सेमिनार, बैठक, भीडभाड हुने व्‍यावसायिक कार्यहरु नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक/भौतिक दूरी, मास्कको अनिवार्य प्रयोग तथा साबुनपानीले राम्रोसँग हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोगलगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आ
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायणकाजि श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण, कस्तो छ अवस्था ?
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्षकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । शनिबार बिहान प्रचण्डको सचिवालयले हिजो बेलुका गरेको पीसीआर परीक्षणका क्रममा प्रचण्डमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार कोरोना संक्रमण भए पनि उहाँको अवस्था सामान्य रहेको छ । प्रचण्डले निजी निवासमै आराम गरिरहनुभएको छ । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने भएकोले पूर्वनिर्धारित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी, शुक्रबार पिसिआर परीक्षण गर्दा आफूलाई कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको र हाल होमआइसोलेसनमा रहेको नेता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्चालमार्फत बताउनु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘पिसिआर परीक्षणमा मलाई कोरोना संक्रमण देखिएकोले म होमआइसोलेसनमा छु । कम्तिमा १४ दिन आइसोलेसनमा नै रहने
अब सामान्य घरमा कोठा भाडामा बस्ने तयारीमा प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अब सामान्य घरमा कोठा भाडा लिएर बस्ने भएका छन् । उनले आफूले अब छिट्टै यस्तो तयारी गरेको खुलासा गरेका हुन् । यसअघि उनीमाथि विलाषी जीवन व्यतित गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। दाहालले आफूले हलो जोतेको पनि सुनाएका छन् । उनले आफू गरिब, किसान परिवारबाट आएको पनि सुनाए ।उनले राजनीति र प्रेममा सबै चिज जायज हुने टिप्पणी गरे । उनले लाजिम्पाटमा आफू पहिले बसेको घर पनि आफ्नो नरहेको स्पष्ट पारे । अहिले खुमलटारमा बसिररहेको घर पनि छोड्ने उनले खुलासा गरेका छन् । काठमाण्डाै – नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रिय सम्मेलनमा मनोनयनतर्फका प्रतिनिधि छननेट गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । आज शुक्रवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले १० प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको प्रवक्ता
तनहुँका दिपक भण्डारीको प्रधानमन्त्रीलाई ओछ्यानबाट मार्मिक पत्र – एक पटक प्रत्यक्ष भेटेर इच्छा मृ’ त्यु रोज्ने व्यवस्था मिलाइदिनुस्
तनहुँको म्याग्दे गाउपालिका ७ का स्थानीय दिपक प्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई सम्वोधन गरेर एक मार्मिक पत्र लेखेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । २०६६ सालमा दुर्घटनामा परि अपाङ्गता भएका उनले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटी आफ्नो पिडाको अवस्था र आवस्यकताको यथार्थता आँखा अगाडि प्रत्यक्ष अवगत गराउन चाहेको उल्लेख गरेका छन् । भण्डारीले सामाजिक संञ्जालमा गरेको पोष्ट जस्ताको तस्तै । श्री माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, नेपाल सरकार, सिंहदरबार काठमाडौं । बिषय:- प्रत्यक्ष कुरागर्ने ब्यवस्था मिलाइयोस् । पिडितलाई “सेवा सुबिधा” या “इच्छा मृत्यू” भन्ने सम्बन्धमा । ————————————– महोदय, उपरोक्त बिषयको सम्बन्धमा म २०६६ सालमा दुर्घटनामा परि अपाङ्गता हुनपुगेको एक पुर्णअपाङ्ग व्यक्ति हुँ । म आफ्नो कुनै पनि का
२.	नेपालकि रिया मानन्धर विश्वकै उत्कृष्ट, संसारका १३ हजार विद्यार्थीहरुलाई पछिपार्दै राखिन कृतिमान ! (97)
४.	श्रीमान् परदेशमा, श्रीमती नेपालमै पौरख गरेर कमाउँछिन महिनाको ५ लाख भन्दा बढि: हेर्नुहोस (83)